हात हेरेर थाहा पाउनुहोस् तपाईको विवाह कहिले र कसरी हुन्छ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
हात हेरेर थाहा पाउनुहोस् तपाईको विवाह कहिले र कसरी हुन्छ ?
हस्तरेखा विज्ञानले मानिसको सबै कुरा हातले निर्धारण गर्ने बताउँछ । यी रेखा हाम्रो जन्मकै क्रममा बन्ने र यिनको प्रभाव जीवनभर रहने बताइन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हस्तरेखाका आधारमा जीवनका धेरै विषयबारे जानकारी लिन सकिन्छ । हातमा भएका रेखाहरु सामन्यतया परिवर्तन हुँदैनन् । जसको प्रभाव जीवनमा परिरहन्छ । हातमा हुने जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मणिबन्ध, सूर्य रेखा, विवाह र सन्तान रेखा महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
यी रेखाको माध्यमबाट आफ्नो पारिवारिक अवस्था, विवाह, धन, विद्या, पारिवारीक अवस्था, विदेश यात्रा योग लगायतका विषयमा जानकारी पाउन सकिन्छ । हस्तरेखा ज्योतिषका अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिको विवाह रेखा हेरेर प्रेम विवाह हुन्छ कि मागी विवाह भन्ने कुरा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ ।
विवाह रेखा कान्छी औंलीकोको तल्लो भागमा हुन्छ । यसलाई बुध पर्वत पनि भनिन्छ । बुध पर्वतको अन्त्यमा केही गहिरो रेखा हुन्छ । त्यसलाई नै विवाह रेखा भनिन्छ । यस्ता रेखा एक मात्र नभएर धेरै पनि हुन सक्छन् ।
एक भन्दा बढी विवाह रेखा हुने ब्यक्तिका प्रेम प्रसंग बढि हुने र धेरै जनासँग नजिकिने ज्योतिषहरुले बताउँछन् । यी रेखाहरु बढी तलपट्टि गएका छन् भने यस्ता ब्यक्तिको बैबाहिक जीवन राम्रो हुँदैन ।
कुनै स्त्रीको हातमा विवाह रेखाको शुरुमै टापु जस्तो चिन्ह छ भने यस्ता महिलाले सौता ब्योहोर्नु पर्ने वा झुक्याएर विवाह गरिदिने खतरा हुन्छ । यस्ता महिलाका पतिलाई स्वास्थ्यको समस्या समेत हुन सक्छ ।
यदि कुनै ब्यक्तिको हातमा विवाह रेखा लामो छ र सूर्य पर्वत सम्म पुगेको छ भने यस्ता ब्यक्तिको बैबाहिक जीवन सुखमय हुन्छ भने जीवनसाथी पनि समृद्ध प्राप्त गर्छन् । यदि कसैको विवाह रेखा बिचमै काटिएको छ भने यसले विदुर वा विधवा हुने संकेत गर्छ ।